Indlela yokuhlanganisa i-website design kanye ne-Search Engine Optimization?
Ngokuvamile, lapho usungula uhlaka olusha cishe noma yiliphi ibhizinisi le-intanethi, ukwabelana kwengonyama kuvame ukusethwa kwi-web design kanye ne-Search Engine Optimization (SEO). Ake sibhekane nakho - ukuba nomklamo wewebhu webhukela, osebenzisekayo nobungcweti yizimpikiswano eziyinhloko uma kuziwa ekuhlinzekeni ukufinyelela okulula nokulungele isivakashi. Kodwa kuthiwani uma ngithi konke lokhu okusebenza kanzima kumklamo wewebhu kungabanjiswa nje emva kwakho konke? Kuthiwani uma abasebenzisi be-intanethi bengasoze baqaphele iwebhusayithi enjalo eboniswe ohlwini oluphezulu lwe-SERP nge-Google? Yingakho ngenzansi ngizoxoxa ngokubaluleka okubaluleke kakhulu kokubambisana okuqine kakhulu kwemisebenzi yakho kumklamo wewebhu kanye ne-Search Engine Optimization njalo ezayo ngezandla.
Ukuthuthukiswa kwenjini yokuhlola injini yakho kuqala ngokubeka okuqukethwe kwakho konke okubonwayo ngokuhambisana nezimo zokucinga. Ngifuna ukuthola amathegi e-alt esithombeni ngasinye ozibeka kumakhasi akho wewebhu. Into yokuthi iningi lezinjini zokusesha (kanye ne-Google ngokwalo) azikwazi "ukufunda" okuqukethwe okubukwayo ngaphandle kokuthi zonke izithombe zihlanganiswe nencazelo edingekayo ngokubhala. Ngaphezu kwalokho, ukuba iwebhusayithi yakho igcwele izithombe ezinkulu kakhulu ngokuqinisekile kuzonciphisa isivinini sakho sonke sokulayisha, ngakho-ke senza okubi ngesimo sakho esiphezulu kuma-SERPs. Yingakho kubaluleke kakhulu ukunciphisa okuqukethwe kwakho okubukwayo ngenkathi ukhumbuza iziqondiso ze-SEO ezihola lapho ukhetha amagama ezithombe, futhi uzifake ngamagama angukhiye angakhonakala amakhasimende akho angase afake phakathi kombuzo wosesho.
Ukuklanywa kwewebhusayithi ephendulayo kuthuthukisa ukucinga nge-Search Engine
Namuhla, amadivayisi aphathekayo asetshenziselwa ukuphequlula i-Inthanethi ngokuphindaphindiwe. Njengoba kucatshangelwa ukuthi inani elikhulayo labathengi abangase lifune imikhiqizo noma amasevisi adinga nge-Smartphones kanye namaphilisi, umklamo we-mobile-friendly manje unikezwe ngezinga eliphakeme kuma-SERPs. Ngakho-ke, i-Google isiqalile ukuphoqa lawo mawebhusayithi asebenzayo ngaphandle kokusetha kahle kwemisebenzi eguqulelwe isipiliyoni sokuphequlula kangcono ngamadivayisi aphathekayo. Yingakho kungumqondo ozwakalayo njalo ukugcina isakhiwo sakho sewebhu esabelayo silondoloze i-Search Engine Optimization isebenza ngesikhathi esifanayo. Ngokwenza ngale ndlela, ungakhohlwa ukuqinisekisa ukuthi okuqukethwe kwakho kubuye kuphendule izicelo zezwi. Ngaphandle kwalokho, kunconywa ochwepheshe ukuba babe nezigaba ze-FAQ ezilungiselelwe kahle ezifakwe kuzo zonke ikhasi lakho lewebhu. Khumbula, izinsizakalo ezinjalo sezivele ziFANELE ukuhlangabezana nezidingo zamanje zosesho zokucinga ngezwi.
Hlela ama-URL akho
Lapha kuza okunye okukhethwa kukho ukuletha ukuthuthukiswa okukhulu kuwebhusayithi yakho kanye ne-Search Engine Optimization. Ngisho ukuthi kufanele ukhokhe ngokuqondile lapho ukhetha igama lesizinda. Njengoba unikezwe kakade, uyalulekwa ukuthi ufake isicelo sama-Google-friendly amagama azo zonke ikhasi lewebhusayithi yakho. Ngabe i-URL ngayinye nekhasi lekhasi liphinde liphinde lithwale ukuthwala incazelo efanele ecebile ngamagama angukhiye angukhiye nemishwana. Ukwenza kanjalo, uzothola ukuthuthukiswa komsebenzisi okwenziwe kahle kwe-web design yakho, ne-Search Engine Optimization ekhonza ukukhangisa kangcono ukukhomba okungcono nge-bots kaGoogle Source .